Developed sida software video tafatirka in la soo saaro by Apple, Pro Goo Final bilaabay nolosha sida software loogu talagalay in sixiddiisa sameeyey video fudud loo heli karo, waayo, imaneysay video iyo filim madax-banaan. Si kastaba ha ahaatee, sanadihii la soo dhaafay awoodaha of Final Cut Pro si weyn u qoondeeyey oo aan hadda arkayno Hollywood filimada weyn oo sidoo kale loo saxar la software this.
Bal aan eegno toban filimada ugu waaweyn ee la soo saxar isticmaalaya Pro Goo Final.
Iyada oo ku saleysan u kaca ee arrin ah in aan hadda ogahay sida Facebook, Network bulshada dhex muuqday Jesse Eisenberg, Andrew Garfield iyo Justin Timberlake. Movie The Si fiican ayuu xafiiska sanduuqa, oo waxaa sidoo kale si wanaagsan helay eedeymahaas movie.
Filimka oo ku guuleystay abaalmarinta Academy for Best ah ayeey, ururiyay by Kirk Baxter iyo Angus Wall. Waxay Final Cut Pro si xaalkaa filimka loo isticmaalo, iyo mid ka mid ah waxyaalihii uu run ahaantii ay jecel yihiin ee ku saabsan software waa awood u leeyahay inuu sameeyo waqtiyada kala duwan. Pro Goo Final ayaa waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in filimka si bedelka wajiga in tiro ka mid ah goobaha ay awood. Laba ka mid ah jilayaasha muhiimka ah ee filimka oo mataano ah, iyo si Muuqaallo waxaa lagu duubay jilayaasha (oo mataano ma ahaayeen) ka dibna software tafatirka ee loo adeegsaday in la abuuro dhalanteed ah in ay ku jiray mataano. Farshaxankiisa matte Digital ahayd muujinta kale ee filimka in isku hallaysay shaqeynta ee Final Cut Pro.
2. gabadha la tattoo Dragon ee (2011)
Tani waxa ay ahayd qabsashada Maraykanka filimka hore ee Iswiidhan ee magaceeda waxaa la mid ah - oo ku salaysan sheeko by Stieg Larsson. Bilowday Daniel Craig oo Rooney Mara, sheekada waa Kulamadan dambi isku dayayaan in ay u qaawisid sirta ku wareegsan ka lumay gabar dhalinyaro ah oo qoys hodan ah.
Mid ka mid ah caqabadaha la movie waxay ahayd inuu jiro jiray dad badan oo saameyn aan la arki karin oo dhan filimka. Pro Goo Final waxaa loo isticmaalay si loo gaaro xasilinta shot iyo uqaadineed muuqaalka ah - wax kasta oo ka rinjiyeynta matte in la abuuro xubno xilliyeed sida baraf cad.
A biimayn sheekooyin sayniska, filimkan la sameeyaa si xun xafiiska sanduuqa in ay keento dhibaato dhaqaale oo weyn ay u studio Disney.
The tafatir oo ka mid ah filimka John Carter ahayd caqabad gaar ah sida badan oo tallaabo la laba jeer toogtay intii lagu soo saarka kacsan. Editor ayaa Eric Zumbrunnen isticmaalo Final Cut Pro si wada meel xubno kala duwan. Iyada oo kala duwan oo badan oo CGI iyo uun saamaynta in la qaban, habka tafatirka ee filimkan uu ahaa mid aad u adag. Pro Goo Final loo adeegsaday in la abuuro badan oo faahfaahsan asalka u baahan tahay in la keeno goobaha screen cagaaran nolosha.
4. 500 Maalmood ee Summer (2009)
Tani waxa ay ahayd, Southhampton cute sool jaceyl bilowday Joseph Gordon-Levitt iyo Zooey Deschanel.
Faalladaada ku filimku ahaa mid ay Alan Edward Bell in DVCPro HD qaab on Pro Goo Final. Sababtoo ah storyline ee movie u muuqanayo in a waqtiga aan toosan, feature aalada of Final Cut Pro ay u sahlay in ay maareeyaan horumarintooda oo ka mid ah goobaha kala duwan. Waxaa sidoo kale jiray 250 saamaynta aan la arki karin oo u abuurmeen isticmaalaya sifooyinka tafatirka Cut Pro Final ee.
5. X-Men Halka: Wolverine (2009)
Sii taaso X-Men ah, wajigeeda taasi raad carruurnimada Wolverine iyo xiriirka aan la walaalkiis. Waxaa si dhab ah uma racfaan taageerayaasha X-Men ama dhaleecayn movie.
Faalladaada ku filimka ahaa by Nicolas De Toth iyo Megan Gill. Waxaa jiray dhowr ah oo kala carar sii aqoonsado inta lagu guda jiro soo saarista filimka, laakiin De Toth iyo Gill isticmaalo Cut Pro Final in ay sii socodka joogta ah sheeko ah. Waa maxay xiiso leh oo ku saabsan tafatir ku filimka tani waa in dhammaan goynta oo ka mid ah goobaha looga baahan yahay waxaa lagu sameeyaa Final Cut Pro 5, ka faa'iidaysanaya kartida HD software iyo sidoo kale muuqaalada multi-clip.
6. gubanaysa kadib Reading (2008)
Comedy A madaw oo ka walaalo ah oo tayo leh Joel iyo Eetaan Coen, waxay ku qoray, soo saaray, saxar ah, oo si toos ah filimka.
Walaalaha Coen isticmaalo Final Cut Pro on filim, maxaa yeelay, waxay ahayd wax fudud oo si sahlan loo isticmaali - oo ay wada xanibeen ka jeexan xunxunna waa sida goobaha ay la shot, oo Final Cut Pro iyaga siiyey dabacsanaan ah in ay loo baahan yahay in si deg deg ah wax ka bedel. On filimkan ugu ficilka la toogtay iyadoo la isticmaalayo kamaradaha Sony laakiin waxaa jiray goobaha dhowr ah oo ku saabsan taas oo camera ah RED lagu daray markii camera dheeraad ah loo baahan yahay. Inkasta oo ay jirto aalada ah si weyn u kala duwan oo u dhexeeya labada nooc ee camera, waxyaabaha la RED la awoodey in la habsami dhexgeliyey footage Sony ah.
7. Uma bannaana Country u Old Ragga (2007)
Kulamadan neo-Western A ka Coen walaalo ah. Waxay si toos ah, ku qoray, oo bilaa saxar-soo-saarka taas.
Movie ayaa sidoo kale u sharaxan abaalmarinta ah Academy for Best ayeey u editor Roderick Jaynes (anagu u ahaa Yoo'eel, iyo Eetaan, Coen).
Toosiyaan iyo tafatirka filim keenaya labada hababka badan soo dhawaadaan waayo, walaalihii Coen. An fududahay in la isticmaalo wax soo saarka sida Final Cut Pro hubisaa in ay dhisaan kartaa sheeko filim ee isticmaalaya sifooyinka waqtiga ee alaabta ka. Movie Tani waxa ay calaamad fursad in hab ee Coen oo walaalo ah, kuwaas oo ka faa'ideystay xalka fiican DVCPRO HD hanaanka goynta ay la barbar dhigo filimada hore in ka xanaaqeen ee xal DV.
Iyada oo ku saleysan novel ah graphic by Frank Miller, tani waa sheeko ka fictionalized ee Termopylae Battle ka - qeyb ka mid ah Wars reer Faaris ahaa. Amray by Zack Snyder, filimka ayaa laga duubay la muhiim ah chroma farsamo super-soo rogida si ay u caawiyaan faa'ideysan sawirka buugga asalka maadda ah. Faalladaada ku filimku ahaa mid ay William Hoy.
Si aad u qabsadaan fiirin sheeko graphic iyo dareenka sawirada filimka ee, editor Hoy loo isticmaalo dhowr ah oo ay Final Cut Pro sifooyinka muhiimka ah sida lakabka qabsiga iyo qasayso qaabab ay u abuuraan si qoto dheer iyo niyadda. Iyadoo fiirin iyo dareenka ah filimka si ay ku xidhan tahay saamaynta abuuray, editor Hoy ku qaatay waqti badan ka doodaya waxa lagu muuqaal ku daray in kubad kasta iyo sida ay taasi saamayn ku yeelan lahaa oo dhererkeeda iyo sii wadida ee goobta kasta.
9. Sky Captain iyo World of Tomorrow (2004)
Iyadoo xiddigaha magaca waa weyn (Gwyneth Paltrow iyo Yuudas Law), oo intaasu waxay ahayd filim aan caadi ahayn in fannaaniinta digital loo isticmaalaa in lagu dhiso jeeda 2D iyo 3D shka multi-u cuskaday footage nool, la storyboards-gacmeed leydin sida animatics computer-ahbaa 3D. Aadka waxaa si fiican u heshay, laakiin ma uusan shiday xafiiska sanduuqa.
Faalladaada ku filimku ahaa mid ay Sabrina Plisco.
Pro Goo Final ahayd gaar ahaan muhiim ah in la abuuro jawi u dhexeeya laba characters in la toogtay ayaa lagu wadaa jirka ah (duwan soundstage digital in loo adeegsaday inta kale ee filimka). Pro Goo Final oggol yahay filim in ay saf ugu animatics la footage nool onstage. Mid ka mid ah caqabadaha la movie waa in tifaftirayaasha lahaa in ay gacanta u yeelaan waqti codes in mid kasta wuxuu qaadan - clips ah ayaa markaas buriyay baxay iyo soocaa si ay loo isticmaali karo ee Final Cut Pro SD Kundarbetsplats ah. Habkan ayaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu abuuro jaro sayidkiisa line-off. Liisaska Dufcaddii ee tashiil ayaa markaas laga keeno galay Pro Goo Final.
Tani waa riwaayad Tacaddi Civil War ku salaysan sheeko by Charles Frazier. Bilowday Yuudas Law, Nicole Kidman, oo Renee Zellweger tani waxay ahayd amaano oo lagu sameeyaa si macquul ah si fiican xafiiska sanduuqa.
Movie ayaa sidoo kale u sharaxan abaalmarinta Academy for Best ah ayeey ha by editor Walter Murch.
Tani waxaa dhab ahaan loo arkaa movie xal u isticmaalka Final Cut Pro ee Hollywood Movies ah. Buug ah oo dhan waxaa loo soo saaray falanqeeyo sida editor Murch isticmaalo Final Cut Pro si xaalkaa ku movie iyo falanqaynta saamaynta ay ku soo saarka shineemo mustaqbalka. Editor Murch ayaa aaminsan in isticmaalka Final Cut Pro on filimkan indirected natiijada kama dambaysta ah hal abuur saameeyeen. Gaar ahaan, isticmaalka awoodaha DVD qoraalka ee Final Cut Pro loogu tala galay in kooxda tafatirka wuxuu awood u eegto wax ka badan inta badan, waxaa dad badan la wadaago, iyo in ay bedelaan sida ay u eegay goobaha qaarkood.
Iyadoo filimada Hollywood u baahan tahay qalab tafatirka amarka ugu sareeya, kala duwan ee saamaynta in aad ku gaari kartaa adiga oo isticmaalaya Pro Goo Final waa mid cajiib ah - sidoo kale soo kuusasho, oo duudduuban, warqada, slide, dhirta, daab heerka mandiil iyo hawlaha edit markii remapping, Final Pro Goo timaadaa kala duwan ee kala guurka video oo kala duwan oo ah video iyo maqal ah filtarrada soo qaadan doona mashruucan film si aad u heerka ku xiga.
Waxaa hubaal ah in finalka Cut Pro xaqiiqdii waa hadda xiddig ee tafatirka ee filimada Hollywood, waa wakhti inay ka sameeyaan xiddig ee sixiddiisa filimada aad sidoo kale.
> Resource > FCP > Top 10 Movies caan ku sameeyo Final Cut Pro